Chemical Kuenzanisa Balancer
Periodic Tafura yezvinhu
Select LanguageChirunguArabicBulgarianChinese (Chakarerutswa)Chinese (Traditional)ChiCroatianCzechDanishDutchFinnishFrenchGermanChiGirikiHindiItalianJapanesekoreanNorwegianporichaPortugueseRomanianRussianSpanishSwedishCatalanomuPhilippinesHebrewIndonesianwokuLatviaRituniaChiSebhiyaSlovakSlovenianUkrainianAlbanianEstonianGalicianHungaryMalteseThaiTurkishPersianAfrikaansChiMalaySwahiliIrishWelshChiberaruziIcelandicMacedonianYiddishArmenianAzerbaijaniBasquerechiGeorgianHaitian CreoleUrduBengaliBosnianCebuanoEsperantoGujaratiHausaChiHmongIgboChiJavaneseKannadaKhmerLaoLatinMaoriMarathiMongolianNepaliPunjabiSomaliTamilTeluguYorubaZuluMyanmar (Burma)ChichewaKazakhMalagasyMalayalamSinhalaSesothoSudaneseTajikUzbekAmharicCorsicanHawaiianKurdish (Kurmanji)KyrgyzKurdishPashitoSamoanScottish GaelicshonaSindhiFrisianXhosa
Dhatabhesi ye10000 yemakemikari maitiro - chemistry maturusi - zvinhu ruzivo
Unoda kutsvaga equations kunze kwenyika, edza yedu mbozha app
Tsvaga mune yako Android kana Iphone App Store yeChemical Equation Balancer app ine logo iyi
Kuongororwa kwehunyanzvi hwepurogiramu
Nhau Chete 5% yeVANHU VANOGONA kuziva
Tsanangudzo dzekutanga muChemistry
Chii chinonzi Chemical equation?
Chemical Equation imwe nzira yekutsanangura maitiro emakemikari umo zita rechinhu chimwe nechimwe chemakemikari rinotsiviwa nechiratidzo chavo chemakemikari.
MuChemical Equation, museve muratidziro unomiririra iko iko kuitika kwazvinoita. Kune imwe-nzira maitiro, isu ticharatidza nemuseve kubva kuruboshwe kuenda kurudyi. Saka zvinhu kuruboshwe zvichave zvinobatanidzwa, uye iyo kurudyi ndiyo ichave chigadzirwa.
Kuenzanisa Kuenzanisa Tsanangudzo
Chiyero chakaringana chinhu chemakemikari anoita equation mune iyo yakazara mutero uye huwandu hweatomu yechinhu chimwe nechimwe mune inoitika zvakafanana kune ese maanogadziridza uye zvikamu. Mune mamwe mazwi, uremu uye kubhadharisa pamativi ese ekupindura zvakaenzana.
Mienzaniso yekusaenzana uye kuenzanisa kuenzana
Izvo zvinogadziriswa uye zvigadzirwa zvemakemikari maitiro zvakanyorwa mune isina kuenzana chemakemikari equation, asi zviyero zvinodiwa kuzadzisa kuchengetedza kwemasasa hazvina kutaurwa. Iyi equation, semuenzaniso, haina kuenzana maererano nehukuru hwekuita pakati pesimbi oxide uye kabhoni kugadzira iron uye kabhoni dhayokisaidhi:
Sezvo pasina maion pamativi ese eiyo equation, mubhadharo uri pakati nepakati (net neut neutral charge).
Pane iyo inogadziridza chikamu cheiyo equation (kuruboshwe kwemuseve), kune maatomu maviri esimbi, asi imwe chete kudivi rezvigadzirwa (kurudyi kwemuseve). Iwe unogona kuti iyo equation haina kuenzana kunyangwe iwe usinga verenge mamwe mamwe maatomu.
Pamativi ese kuruboshwe nekurudyi kwemuseve, chinangwa chekuenzanisa iyo equation kuwana huwandu hwakaenzana hwerudzi rumwe nerumwe rweatomu. Izvi zvinoitwa nekushandura macompe coefficients (nhamba dzinoiswa pamberi pemafomula emakomponi). Zvinyorwa (zvidiki kurudyi kwemamwe maatomu, simbi neoksijeni mune ino kesi) hazvina kumboshandurwa.
Iyo equation yakaenzana ndeiyi:
Chii chinonzi chemistry?
Cherekedza, zvese zvinoonekwa, kusanganisira miviri yedu, zvinhu. Kune zvinhu zvakasikwa zvakadai semhuka, zvirimwa, nzizi, ivhu ... zvinhu zvakagadzirwa.
Zvinhu zvakasikwa zvine huwandu hwezvinhu zvakasiyana. Uye zvinhu zvakagadzirwa zvinoumbwa nezvinhu. Zvese zvinhu chinhu kana musanganiswa wezvimwe zvinhu. Semuenzaniso: Aluminium, mapurasitiki, girazi, ...
Ndezvipi zvinhu zvavo?
Chinhu chimwe nechimwe chine zvimwe zvinhu: mamiriro kana fomu (yakasimba, mvura, gasi) ruvara, hwema uye kuravira. Kukarukureta kana insoluble mumvura ... Melting poindi, kufashaira nzvimbo, yakatarwa giravhiti, magetsi conductivity, nezvimwe.
Uye kugona kushandurwa kuita zvimwe zvinhu, semuenzaniso, kugona kuora, kumhanya ... ndiwo makemikari zvivakwa.
Chii chinonzi atomu?
Zvinhu zvese zvakaumbwa nezvidiki zvakanyanya, zvemagetsi zvisina kwazvakarerekera kuita maatomu Kune makumi emamirioni ezvinhu zvakasiyana, asi anopfuura zana chete marudzi emaatomu.
Atomu rinoumbwa nenhamba yakanaka inobhadharwa uye goko rinoumbwa neimwe kana anopfuura maerekitironi asina mhosva
Inonyanya kufarirwa equation
Iyo inozivikanwawo sey synthesis reaction. Imwe yemhando inowanzoitika yemubatanidzwa maitiro ndeyekuita kwechinhu chine oxygen kuita fomu oxide. Pasi pemamwe mamiriro ezvinhu, simbi uye zvisina masimbi zvese zvinoita nyore neoksijeni. Imwe yatsva, magnesium inopindura nekukurumidza uye zvinoshamisa, ichiita neoksijeni kubva kumhepo kugadzira yakanaka magnesium oxide powder.
CuO + H2O → Cu(OH)2 2VaAl + 3Br2 → 2AlBr3 Cao + H2O → Ca(OH)2 O2 + P2O3 → P2O5 Fe + 2Fe (HAPANA3)3 → 3Fe(NO3)2 2VaAl + 3I2 → 2AlI3 H2O + ZnO → Zn(OH)2 Wona Zvese Kusanganisa kuita
Maitiro mazhinji ekuora anosanganisira kupisa, mwenje, kana magetsi kuisa simba. Binary compounds ndiwo macomputer ane zvinhu zviviri chete. Rudzi rwakareruka rwekupindura pakuora ndepaya panowanikwa bhinari. Mercury (II) oxide, yakasimba tsvuku, inoora kuita mercury uye okisijeni gasi painopisa. Zvakare, maitiro anoonekwa seyekuora maitiro kunyangwe kana chimwe kana zvimwe zvezvigadzirwa zvichiri mubatanidzwa. Simbi carbonate inoputsika kuita simbi oxide uye carbon dioxide gasi. Calcium carbonate semuenzaniso inoora kuita calcium oxide uye carbon dioxide.
2H2O2 → 2H2O + O2 4Al (HAPANA3)3 → 2Al2O3 + 12Hapana2 + 3O2 2CH4 → C.2H2 + 2H2 2KMnO4 → MnO2 + O2 + K2MnO4 2C2H5OH → H2O + C2H5OC2H5 MgCO3 → MgO + CO2 CH4 → C. + 2H2 Wona Zvese Kupora kuita
An oxidation-reduction (redox) reaction rudzi rwemakemikari maitiro ayo anosanganisira kuchinjisa maerekitironi pakati pemhando mbiri. An oxidation-kudzikisira kuita chero chemakemikari maitiro umo iyo oxidation nhamba yemorekuru, atomu, kana ion inochinja nekuwana kana kurasikirwa neelectron. Kugadziriswa kweRoxox kwakajairika uye kwakakosha kune mamwe eakakosha mabasa ehupenyu, anosanganisira photosynthesis, kufema, kupisa, uye ngura kana ngura.
Yakashata + 4HNO3 → 2H2O + HERE2 + Fe (HAPANA3)3 C + PbO → CO + Pb Cl2 + H2SO4 + 2FeSO4 → Fe2(SO4)3 + 2HCl Br2 + 2HI → I2 + 2HBr 3CuS + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 4H2O + 2Hapana + 3S 2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH H2O + NaClO + 2Fe (OH)2 → NaCl + 2Fe (OH)3 Wona Zvese Oxidation-kudzikisira kuita
A + BC → AC + B Element A isimbi mune inoitika yakawanda uye inotsiva element B, simbi iri mukomboni zvakare. Kana chinhu chinotsiva chiri chisiri-chesimbi, chinofanira kutsiva imwe isiri yesimbi mukomboni, uye inova yakaenzana equation. Simbi zhinji dzinogadzikana nyore nyore neacids, uye imwe yeanogadzira zvigadzirwa kana vachidaro ihydrogen gasi. Zinc inopindura kune aqueous zinc chloride uye hydrogen ine hydrochloride acid (ona mufananidzo pazasi).
Fe + CuCl2 → Cu + FeCl2 H2SO4 + Na2O2 → H2O2 + Na2SO4 CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCI Al (OH)3 + NaOH → 2H2O + NaAlO2 C6H5Cl + 2NaOH → C6H5ONa + H2O + NaCl 2Cl2 + CH2Cl2 → HCL + CHCl3 Mg + ZnCl2 → Zn + MgCl2 Wona Zvese Imwe-yekutsiva maitiro
AB + CD → AD + CB A uye C ndeyezvakanaka zvakabhadharwa cations mune ino maitiro, nepo B naD ari asina mhosva akapomerwa anion. Kaviri-kutsiva maitiro anowanzoitika mune aqueous mhinduro pakati pemakomponi. Kukonzera kuita, chimwe chezvigadzirwa chinowanzo kuve chakatsetseka chakatsetseka, gasi, kana chemakemikari semvura. Mafomu anonamatira mune maviri-ekutsiva maitiro kana macations kubva kune imwe reactant achibatanidza kugadzira isonubolle ionic compound pamwe ne anion kubva kune imwe reactant. Iyi inotevera yekuitika inoitika kana aqueous mhinduro ye potassium iodide uye lead (II) nitrate inosanganiswa.
Cu (OH)2 + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + 2H2O Cr + 2HCl → H2 + CrCl2 2Na3PO4 + 3CaCl2 → Ca3(ZU4)2 + 6NaCl Cao + H2SO4 → H2O + Nyaya4 3Br2 + C6H5OH → C6H2Br3OH + 3HBr HCI + NaHS → H2S + NaCl BaCl2 + K2SO4 → 2KCl + BaSO4 Wona Zvese zviviri-zvinotsiva mhinduro
Wona Wedu Chemical Equation Dictionaru Webhusaiti Mune Akasiyana Mutauro
ChiArabic (قاموس المعادلات الكيميائية) ChiBulgarian (речник на химичните уравнения) ChiChinese (Chakareruka) (化学 方程式 字典) ChiChinese (Chinyakare) (化學 方程式 字典) ChiCroatia (rječnik kemijskih jednadžbi) ChiCzech (slovník chemick rch rovnic) Danish (kemisk ligningsordbog) ChiDutch (woordenboek voor chemische vergelijkingen) ChiFinnish (kemiallisten yhtälöiden sanakirja) ChiFrench (dictionnaire d'équations chimiques) ChiGerman (Wörterbuch für chemische Gleichungen) ChiGiriki (λεξικό χημικής εξίσωσης) ChiHindi (रासायनिक समीकरण शब्दकोश) ChiItaly (dizionario delle equazioni chimiche) ChiJapanese (化学 反 応 式 辞書) ChiKorea (화학 방정식 사전) ChiNorway (kjemisk ligningsordbok) ChiPolish (Słownik równań chemicznych) Chiputukezi (dicionário de equação química) ChiRomania (dicționar de ecuații chimice)
ChiRussian (словарь химических уравнений) ChiSpanish (diccionario de ecuaciones químicas) ChiSweden (kemisk ekvationsordbok) ChiCatalan (diccionari d'equacions químiques) ChiPhilippines (kemikal na equation ng kemikal) Chihebheru (מילון משוואה כימית) ChiIndonesian (kamus persamaan kimia) ChiLatvia (ķīmisko vienādojumu vārdnīca) ChiLithuania (cheminių lygčių žodynas) ChiSerbian (речник хемијских једначина) ChiSlovaki (slovník chemických rovníc) ChiSlovenia (slovar kemijske enačbe) ChiUkraine (словник хімічних рівнянь) ChiAlbania (fjalor i ekuacionit kimik) ChiEstonia (keemiliste võrrandite sõnastik) ChiGalician (dicionario de ecuacións químicas) ChiHungary (kémiai egyenlet szótár) Maltese (dizzjunarju tal-yakuzazzjoni kimika) ChiThai (พจนานุกรม สมการเคมี) ChiTurkey (kimyasal denklem sözlüğü)
ChiPezhiya (فرهنگ معدلات شیمیایی) Afrikaans (chemiese vergelyking woodeboek) ChiMalay (kamus persamaan kimia) Swahili (kamusi ya equation yemhando) ChiIrish (foclóir cothromóid cheimiceach) Welsh (geiriadur hafaliad cemegol) ChiBelarusian (слоўнік хімічных ураўненняў) ChiIcelandic (efnajöfnuorðabók) ChiMacedonia (речник за хемиска равенка) ChiYidishi (כעמיש יקווייזשאאן ווערטערבבך) ChiArmenia (քիմիական հավասարության բառարան) ChiAzerbaijani (kimyəvi tənlik lüğəti) Basque (ekuazio kimikoen hiztegia) ChiGeorgia (ქიმიური განტოლების ლექსიკონი) Haitian Creole (diksyonè ekwasyon chimik ChiUrdu (کیمیائی مساوات کی لغت) ChiBengali (রাসায়নিক সমীকরণ অভিধান) ChiBosnia (rječnik hemijskih jednadžbi) Cebuano (kemikal nga equation nga diksyonaryo) Esperanto (vortaro pri kemia ekvacio) ChiGujarati (રાસાયણિક સમીકરણ શબ્દકોશ) Hausa (kamus din lissafi na sinadarai) ChiHmong (tshuaj lom neeg txhais lus) Igbo (duramazwi remakemikari ọkọwa okwu) ChiJavanese (kamus persamaan kimia) ChiKannada (ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣ ನಿಘಂಟು) Khmer (វចនានុក្រម សមីការ គីមី) ChiRao (ວັດ ຈະ ນາ ນຸ ກົມ ສົມ ມີ ມີ) ChiLatin (equation eget duramazwi) ChiMaori (papakupu whārite matū) ChiMarathi (रासायनिक समीकरण शब्दकोश) Shona (химийн тэгшитгэлийн толь бичиг) Nepali (रासायनिक समीकरण शब्दकोश) ChiPunjabi (ਰਸਾਇਣਕ ਸਮੀਕਰਨ ਕੋਸ਼) Somali (qaamuuska isle'eg kiimikada) ChiTamil (வேதியியல் சமன்பாடு அகராதி) ChiTelugu (రసాయన సమీకరణ నిఘంటువు) Yoruba (iwe unogona kushandisa zvigadzirwa zvako) Zulu (isichazamazwi se-chemical equation) Myanmar (Burmese) (ဓာတု ညီမျှခြင်း အဘိဓါန်) Chichewa (zvigadzirwa equation dikishonale) ChiKazakh (химиялық теңдеу сөздігі) ChiMalagasy (rakibolana fitoviana simika) Malayalam (rakibolana fitoviana simika) Sinhala (රසායනික සමීකරණ ශබ්ද කෝෂය) Sesotho (makemik'hale ea equation ea nemakemik'hale) Sudanese (kamus persamaan kimia) ChiTajik Uzbek (kimyoviy tenglama lug'ati) ChiAmharic (የኬሚካል መዝገበ መዝገበ-ቃላት) ChiCorsican (dizziunariu d'equazioni chimichi) ChiHawaiian (puke wehewehe ʻōlelo kūmole) Kurdish (Kurmanji) (ferhenga hevkêşeya kîmyewî) Kyrgyz (химиялык теңдемелер сөздүгү) ChiLuxembourgish (chemesche Gleichwörterbuch) ChiPashto (د کيمياوي معادلې قاموس) ChiSamoa (vailaʻau faʻasino igoa) ChiScottish Gaelic (faclair co-aontar ceimigeach) Shona (kemikari equation duramazwi) ChiSindhi (ڪيميائي مساوات ڊڪشنري) Frisian (gemysk fergeliking wurdboek) Xhosa (imichiza equation duramazwi)
Tài khoản đăng ký tại Giáo Dục Sáng Tạo sẽ được sử dụng cho tất cả những ứng dụng bao gồm
Từ Điển Phương Trình Hoá Học, Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Thư Viện Lịch Sử Việt Nam.
Ruzivo runonakidza chete vanhu vashoma vanoziva
Periodic Tafura yezvinhu Solubility tafura Electron kugadzirisa Reactivity akateedzana Electrochemical akateedzana
About Iva Akagadzirira Dzidzo
Zvimwe Dzidzo Software
Iva Akagadzirira IELTS Duramazwi reFizikiki Duramazwi reMutauro Wemasaini weVietnam Raibhurari yeVietnamese Nhoroondo Kugadzira Dzidzo Sisitimu Iva Akagadzirira Chikoro VN Quà Tặng Trần Gia 101 Chikonzero Nei Chikonzero uye Mhedzisiro Nyaya Iva Akagadzirira Affiliates Network
Unogona kutibatsira kuchengeta iri basa rakanaka
Iyi sisitimu inounzwa kwauri nevadzidzi veVietnamese uye vadzidzisi vanopa zvinesimba kuti vachengetedze zvemukati uye vape ruzivo rwakashaikwa
Kupa chikonzero chedu, hausi kungobatsira kutsigira webhusaiti ino kuenderera mberi, asi zvakare kubatsira zvakananga chirongwa chekubatsira muVietnam kuvaka shcools mumaruwa.
Mari yemari yekushambadzira inotibatsira kuchengetedza zvirimo nemhando yepamusoro nei tichifanira kuisa kushambadza? : D
Ini handidi kutsigira webhusaiti (pedyo) - :(